Holiday Bonus Card | Tilmaanta Safarka ee Austria
Khariidada Wadashaqeynta Austrian
Wada-hawlgalayaasha gunnada ah
Xulashada Xubnaha raadinta
Cuntada & Cabbitaanka & Qoob-ka-ciyaarka
Wadaagga Gunnada Dahabka ah ee Dahabka ah
Rafiiqa lagula taliyay
Dukaammada & Adeegyada
Ciyaaraha & Waqtiyada firaaqada & Dhaqanka
Kirada Qalabka Ciyaaraha
Dugsiyada Ciyaaraha Jiilaalka & Xagaaga
TILMAAMAHA GUUD EE XAALADAHA KAADHKA
Xubnaha Kaarka Soo-dhaweynta, La-hawlgalayaasha iyo Soo-booqdayaasha.
Waxaan u diyaarineynaa HBC 2.0 waxyaabo badan oo cusub. Hal talaabo waa goobahan cusub ee khaaska ah fasaxaaga Austria. Fadlan daawo fiidiyowga ama u adeegso bartayada ugu weyn macluumaad dheeraad ah. Wada-hawlgalayaasha ayaa ka arki kara liistadooda liidata ee Qaybta Iskaashiga La Ilaaliyo.
Holiday Bonus Card - Goobta ugu weyn
Holiday Bonus Card wuxuu ku dadaalayaa inuu ku siiyo waayo-aragnimo shabakad taxaddar la'aan ah. Waxaan ka tagnay aagag badan oo lagu falanqeeyo macluumaadkaaga shakhsiyeed si loo hubiyo asturnaantaada.
Si kastaba ha noqotee, isticmaalka buskudku waa cunsur lama huraan u ah websaydhada casriga ah. Sidaa darteed, waxaan sidoo kale u isticmaalnaa buskud. Annaga oo ah shirkad miyir-qabta warbaahinta, waxaan sidoo kale soo galnay fiidiyowyo ka socda VIMEO iyo YouTube iyo sidoo kale Panoramas oo ka socda Momento360.
Markaad gujiso batoonka shaashadda oo dhan, waxay kuxiran tahay VIMEO, YouTube ama adeegayaasha Momento360. Xiriirintan, waxaan lumineynaa xakameyntaada sii wadida xogtaada ee adeegayaasha dibada. Haddii aad oggolaato (annaguna waxaan saadaalinaynaa heshiiskaaga sidoo kale haddii aad shaqada ka ceyriso), waxaan kugu soo dhoweynaynaa degelkeena.
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan ilaalinta xogta ayaa laga heli karaa annaga
Gaarka ah Austria - Hoyga
Wada-hawlgalayaasha Austrian - Khariidadda
Agagaaga Wadaaga La Ilaaliyo
Holiday Bonus Card - Goobta Weyn
The Holiday Bonus Card KG waxay u rajeyneysaa dhamaan dadka safarka ah waqti wanaagsan Austria